TTSweet: ကျွန်မပြောချင်တဲ့ အချစ်အကြောင်း
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! April 2, 2011 at 5:59 PM
မမရေ အချစ်အကြောင်းလေး ခံစားအားပေး သွားတယ်နော်..
သက်ဝေ April 2, 2011 at 6:11 PM
ဖတ်ပြီး ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မျက်ရည်ဝဲချင်ချင် ဖြစ်သွား...
နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးမှာ အချစ်တွေ အများကြီး တွေ့လိုက်ရတယ်...
ဝက်ဝံလေး April 2, 2011 at 7:14 PM
အချစ်အကြောင်းလာဖတ်တယ် တီတီ ဆွီ
sonata-cantata April 2, 2011 at 8:49 PM
တီဆွိ...အချစ်အကြောင်းလေးက အယင်က ကြားဖူးတဲ့ ဇတ်လမ်းဟောင်းလေးပေမဲ့
ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါ ဆိုဦးမလဲလေ..
ဘယ်..ဘယ်တော့မှ..မရိုးနိုင်ပါ.. ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေးလိုပဲ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 2, 2011 at 8:58 PM
အို.. ဒီအချစ်အကြောင်းက တမျိုးတဘာသာ ကောင်းတဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးဘဲ။
ဟုတ်သားနော် အချစ်ဆိုတာ နာကျင်ခါးသီးဖွယ်ရာရှိသလို ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာလည်း ရှိနိုင်သေးတာဘဲ။
ဖတ်တဲ့သူကို သိင်္ဂါရ ရသလေးတွေ မျှဝေပေးတဲ့ အစ်မရဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
kay April 3, 2011 at 12:03 AM
အဲဒီ သူ ကို သိတယ်...း)
rose April 3, 2011 at 12:21 AM
တီဆွိ ရေးထားတာ ဦးခြိမ့်နဲ့ အစ်မ တွေ့ခါစက အကြောင်းလေးလားပာင်... ဒါမှ မပာုတ် ၀တ္ထုလား။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ "သူအနားမှာ ရှိလျင် ကျွန်မ လုံခြုံ စိတ်ချ နေသည်"
ဦးခြိမ့်, comment ရေးပါအုံးဗျ....း)
T T Sweet April 3, 2011 at 1:38 AM
အန်တီဆွိတစ်ခါတစ်ရံ အချစ်အကြောင်းရေးတာကို ရေးနေကျမဟုတ်လို့လားမသိ၊ အောက်က အနောနိမတ်စ်တွေက တဟင်းဟင်းနဲ့ နော် ....
အမ ဖတ်လို.ကောင်းလိုက်တာ စာတွေအဆက်မပြတ်ရေးပါနော်
ကိုဇော် April 3, 2011 at 2:03 AM
ဒီလို အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိခဲ့ကြတာကိုး . . ဟိဟိ
T T Sweet April 3, 2011 at 2:16 AM
အဟော် ဒီလူတွေ ... အချစ်အကြောင်းရေးပါတယ်ဆိုမှ ဟာသရေးတယ်များ ထင်နေလားမသိ။ တဟိဟိနဲ့ လာကြပြန်ပြီ။ ခက်တယ် ... ခက်တယ် ...
Yuya Mon April 3, 2011 at 4:28 AM
တန်ခူး April 3, 2011 at 10:47 AM
တို့ ကတော့ မဟိပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ်... ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တယောက်ချင်းဆီကို သိနေလို့ ပေါ့... တို့ အမျိုးသားနဲ့ မမြဲပြောဖြစ်တယ်.. အဲဒီရီးစားဟောင်းအစုတ်ပလုတ်ကြီးနဲ့ ကွဲတာ ပိုကံကောင်းချင်လို့ လို့ ... သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ကြည်နူးစရာမိသားစုလေးကို တွေ့ ရတိုင်း အဲဒီမျက်မှန်ကြီးနဲ့ အကိုကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းကိုကြည့်တဲ့အကြင်နာမျက်လုံးလေးတွေတွေ့ ရတိုင်း ဝမ်းသာကြည်နူးမိတယ်...တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ သူနဲ့ မှတကယ်.. ဟုတ်တယ်မိုလားဆွိ...btw,ဟိုးအတိတ်က မင်းသားသူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ငါ့အမျိုးသားကတော့ နင်တို့ အိမ်နားက အာပူလျှာပူဆိုင်ကို စားကောင်းလွန်းလို့ခုထိမမေ့ဘူးတဲ့လေ... အကိုကြီးရေ... မြှားနတ်မောင်မိညိုကို ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်သလဲ သိချင်စမ်းပါဘိ... နာမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင် စိတ်ထားချိုတဲ့ဆွိလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရလို့ လေ
အင်ကြင်းသန့် April 3, 2011 at 11:51 AM
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ.... :)
akhayar April 3, 2011 at 12:55 PM
အငိုလေးနဲ့ စ ...ကြည်နူးမူ အဆုံး...
ကားအစုတ် နဲ့ ကက်ဆက်စုတ်လေး...နုပျိုနေတဲ့ နှလုံးသားက
more than words နဲ့ဆိုတော့ပိုပြည့်စုံသွားတဲ့ အချစ်ကြောင်း....
မဆွိ ရဲ့ အချစ်အကြောင်းလေး ဖတ်သွားတယ် ရီစရာမကောင်းပါဘူး ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်
mgchaint April 4, 2011 at 8:57 AM
mgchaint April 4, 2011 at 11:10 AM
"သူ့ထံမှ စာလေးများလည်း တစ်ပတ်တစ်ခါဆိုသလို မှန်မှန်ရောက်လာသည်။ သူ့လက်ရေးများက လက်ရေးပိုင်ရှင်နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ လှလွန်းလှပါတကား။"
Hmm!!! currently, my hand writting is too bad since I didn't write letter in paper. :)
But, I feel sad that my face is opposite of my hand writing.
Vista April 4, 2011 at 1:14 PM
T T Sweet April 4, 2011 at 3:19 PM
အပေါ်က ကောင်မလေးတွေ တဟီးဟီး တဟမ်ဟမ်နဲ့ ဘာဖြစ်နေကြတာတုံး။ ဟွန့်နော် ... ဒီကောင်မလေးတွေ ...
ပို့စ်တစ်ပုဒ် ညနေကျ အမြန်တင်မှပဲ .... .... ....း))
ခနွဲ April 4, 2011 at 6:44 PM
တီဆွီရေးသော အချစ်အကြောင်းကို ယောင်ပေယောင်ပေနဲ့ နားထောင်သွားပြန်ပါတယ်။
ကားကသာစုတ်သည်။ ကက်ဆက်ကသာ စုတ်သည်။ ကျွန်မတို့ နှလုံးသားများ သစ်လွင် နုပျိုခဲ့ကြပါကလား။
Sunny April 4, 2011 at 7:24 PM
ကြည်နူးစရာလေး တီဆွိ.. :)
ဟီး ဘယ်နှစ်ခါရှိမှန်းတောင်မသိဘူး လာဖတ်တာ
"ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ရှိခဲ့သည်ကား သူနဲ့အတူဆိုလျင် ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ပြတ်သား ခိုင်ကျင်စွာဖြင့် စောင့်ရှောက်မည့်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်၊ သူအနားမှာရှိလျင် ကျွန်မလုံခြုံစိတ်ချနေသည်။"
အဲဒီ့စာသားလေးကြိုက်လွန်းလို့ facebook မှာ share ခွင့်ပြုပါ
ပွင့်မြုးဇင် April 5, 2011 at 12:16 PM
ခွိ ခွိ.. မိုက်တယ်ဗျာ.. ဇာတ်လမ်းကတော့..း)
T T Sweet April 5, 2011 at 7:20 PM
မြူးမြူး လာခွိပြန်ပြီ ... ဒီကောင်မလေးတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျီးလှန့်သလို လှန့်နေရတယ် ... သူတို့တွေ မချစ်ဖူးကြတာကျနေတာပဲနော် ... ဟင်း ...ဟင်း ..
အပေါ်က အနောနိမတ်စ် ညီမလေးထင်တာပဲ။ faccebook မှာ ရှယ်လို့ရပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ပေးစရာမလိုပါ။ ရေးထားတာကို သဘောကျတယ်ဆိုတာကို ကျေနပ်လှပါပြီ။
ခဏခဏလာဖတ်သော အနောနိမတ်စ်အားလည်း ကျေးဇူး။
တန်ခူးပြောမှပဲ ရှေ့ဖြစ်ဟောင်းတွေ သတိရလာပြီ။ ဟားဟား။
ချန်းနီလဲကိုကိုထုနဲ့ ကြည်နူးစရာလေး ရေးပါဦး။
အပေါ်ကလူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူလှတယ်လို့ ထင်နေသေးလားမသိ။ ခွိခွိ။
nyimuyar April 5, 2011 at 9:31 PM
Hninsiphuu April 6, 2011 at 6:06 PM
လွင်မ April 8, 2011 at 7:29 PM
T T Sweet November 21, 2011 at 8:07 PM
အော် ဇွန်ဇွန်လဲ ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီးမှကိုး။ ဇွန်ဇွန်တစ်ယောက်လဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ညီမရယ်။
Unknown February 29, 2012 at 8:05 PM
Hello ama! I do not understand. Beginning I thought the letter who is sending the girl is Mi Nyo. I don't know that the friend is man.. I have poor reading in novel. Could you please write more in sharing knowledge like how to buy house at Sydny or why chance of getting Singapore PR is low or many other? I also like your funny stories such us why coriander leave is spicy or always dishes are stick or black .. :D... I always come and visit ur blog.. (i am sorry that i could not type in Burmese font. It take me years to find one word in burmese.. :P)
T T Sweet March 7, 2012 at 12:12 AM
မမိညိုဆိုတဲ့ တီဆွိရဲ့ သူငယ်ချင်းက မိတ်ဆက်စာရေးပေးလိုက်တာပါ။ မမိညိုနဲ့ သူနဲ့ကလဲ အေအိုင်တီမှာ ခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေပါ။
စင်္ကာပူက PR ကိစ္စကတော့ ဦးခြိ်မ့်က ပိုပိုင်တာ။ topic ကောင်းတစ်ခုပဲ။ သူ့ကို အချိန်ရရင် ရေးခိုင်းပါ့မယ်။
ဆစ်ဒနီမှာ အိမ်ဝယ်တာတော့ မောင်ကန်ဂရူးရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကို ၄ပိုင်းခွဲ တင်ပေးတာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ ပြီးခဲ့တာလေ။ အောက်မှာ လင့်ခ်။
အားရင် မြန်မာလိုရိုက်တတ်အောင် စမ်းရေးကြည့်ပါလား။ အမှန်က ပြောသလောက်တော့ မခက်လှပါဘူး စုရေ။ ရိုက်ရင်းနဲ့ တတ်သွားတာပါပဲ။
အမ ရေ ဗမာ လိုရေတတ်အောင် ကြင့်နေပြီ.. အမပြော်သလိုပဲသိတ်မခက် ပါဖူး ။။
T T Sweet March 15, 2012 at 1:50 PM
ဆုဆု ဗမာလိုရေးတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဟုတ်တယ် သိပ်မခက်ဘူး။ နောက်ဆို အလွတ်တောင်ရသွားမှာ။ အစ်မဆို အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တာထက် ပိုမြန်တယ်း)
Natthamee October 5, 2012 at 8:59 PM
T T Sweet October 5, 2012 at 9:14 PM
ဘလော့ဂ်တစ်ခုလုံး လာမွှေတယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျေးဇူးနော်။ တခြားပို့စ်တွေက ကွန်မန့်တွေလဲ ဖတ်ရကြောင်းပါ။
Your love story is very romantic and sweet....